Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Henry Clay | John McCain - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Henry Clay | John McCain
Voamariky ny: Fitarihana Fanahy na Fanahy Lehibe Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Rehefa nijery ny sarin'i Henry Clay aho, dia nahita an'i John McCain avy hatrany teo imason'i Henry Clay aho. Nandritra ny fivoriana nanaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, ny tari-dalan'ny fanahy notarihin'i Kevin izay nampiseho ny fahaizan'ny lalao mialoha ny fiainana, dia nifanaraka tamin'ity lalao ity. Ny fitoviana dia voamarika eo anelanelan'i Clay sy McCain.
Mpitarika miavaka amin'ny maha-loholona azy
Ny komity jeneraly iray, tarihan'i John F. Kennedy ao amin'ny 1957, dia nomena andraikitra hanombanana sy hanomezam-boninahitra ireo mpikambana taloha. Ity komity ity dia nanambara fa i Henry Clay no Loholona lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'io vatana io.
John McCain dia iray amin'ireo loholona hajaina indrindra any Etazonia ary efa nahazo loka maro izy tamin'ny asa fanompoana nataony, anisan'izany ny Paul H. Douglas Ethics ao amin'ny Government Award. Izy dia nantsoina hoe iray amin'ireo "Olona 25 manan-kery indrindra any Amerika" tamin'ny magazine Time tamin'ny 1997.
Zavatra tsy ampy amin'ny teny malagasy
Henry Clay dia nihazakazaka in-telo tao amin'ny Presidansy Amerikana ary na dia isan'ny iray amin'ireo mpanao politika malaza sy malaza indrindra tamin'ny vanim-potoana aza dia very ny hazakazaka tsirairay.
John McCain dia nitady ny fanendrena filoham-pirenena repoblikana nandritra ny taona maro, saingy tsy nahomby teo am-pelatànany.
Repoblika ho an'ny fitiavana ny firenena
Henry Clay sy John McCain dia mizara ny toetra mampiavaka ny Union, ho an'i Etazonia.
Rômanina toy ny Hawks
Ny Henry Clay sy John McCain dia samy naneho ny fihetsika Hawkish momba ny fiarovam-pirenena sy ny raharaha miaramila.
Karmic Soul Groupings
Of interest, Andrew Jackson, izay voatondro ho nalaina indray tao amin'ny pejin'i John Kerry, ary Henry Clay dia mpifanandrina politika. Henry Clay izay nanampy an'i John Quincy Adams nandresy an'i Andrew Jackson tamin'ny fifidianana ny 1824.
Amin'izao vanim-potoana izao, i John McCain sy i John Kerry dia tafangona amin'ny alàlan'ny fifanarahana iraisam-pirenena ao Vietnam sy ny fanoloran-tenany ho an'ireo voafonja ao amin'ny Ady ary ireo tsy tafiditra ao. Mpinamana be ry zareo.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endriky ny endrik'i Henry Clay sy John McCain.
Innate Past Life Talent: Lasa Senatera Amerikana manana fahefana i John McCain, tahaka an'i Henry Clay.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Henry Clay sy Andrew Jackson dia mpiara-belona politika, toa an'i John McCain sy John Kerry ankehitriny.